China Wood Izikulufu Kukhiqizwa Futhi Ifektri | Zhanyu
· Okujwayelekile: DIN / ASTM
· Usayizi: m6-m12
· Amandla Wokunikezela: Amathani angama-200 ngenyanga
· Isikhathi Sesampula: 3-5days
· Indlela yokukhokha: T / T, L / C.
Isikulufu sokhuni, esaziwa nangokuthi isikulufa sokhuni, siyefana nesikulufa semishini, kepha intambo yesikulufa iyintambo ekhethekile yesikulufa sokhuni, engafakwa ngqo kwisakhi sokhuni (noma ingxenye) ukuxhuma ingxenye yensimbi (noma engeyona eyensimbi) ngembobo yomgodi enengxenye yokhuni. Lolu hlobo lokuxhumeka luyatholakala.
Inzuzo yesikulufa sokhuni ukuthi inamandla okuqinisa okuqinile kunokubethela isipikili, futhi ingasuswa futhi ifakwe esikhundleni sayo, engalimazi indawo yezinkuni futhi elula kakhulu ukuyisebenzisa.
Izinhlobo ezijwayelekile zezikulufu zokhuni ziyinsimbi nethusi. Ngokusho kwekhanda lesipikili, zingahlukaniswa zibe yindilinga eliyikhanda eliyindilinga, uhlobo lwekhanda oluyisicaba nohlobo lwekhanda okusaqanda. Ikhanda le-nail lingahlukaniswa ngesikulufa esinqotshiwe kanye nesikulufu esinqotshiwe. Ngokuvamile, isikulufu sekhanda eliyindilinga senziwe ngensimbi emnene futhi siluhlaza okwesibhakabhaka. Isikulufu sekhanda eliyisicaba sipholile. Isikulufu sekhanda eliyisiyingi kuvamise ukufakwa nge-cadmium ne-chromium. Kuvame ukusetshenziselwa ukufaka amaqabunga, i-hook nezinye izesekeli ze-Hardware. Ukucaciswa kunqunywa ubukhulu nobude benduku nohlobo lwekhanda lesipikili. Ibhokisi liyunithi lokuthenga.
Kunezinhlobo ezimbili ze-screwdrivers zokufaka izikulufo zezinkuni, eyodwa iqondile kanti enye iyisiphambano, elungele umumo we-groove wokhuni lwe-screw head. Ngaphezu kwalokho, kukhona umshayeli okhethekile ofakwe kumbhoshongo womnsalo, ofanele ukulayishwa nokulayishwa ngezikulufo ezinkulu zokhuni. Kuyinto elula futhi yokonga abasebenzi.
Langaphambilini Izikulufu zeHex head self drilling
Olandelayo: Ibhawodi lokuhamba
China handan hebei supply Ukhonkolo ihange Drop -...